Accueil > Gazetin'ny nosy > Kung Fu Malagasy : « Toherinay ny fanjanahana vaovao »
Kung Fu Malagasy : « Toherinay ny fanjanahana vaovao »
Mitsingerina amin’ity anio sabotsy 31 jolay ity ny faha-36 taona nandripahan’ny fitondrana Ratsiraka ny mpanao haiady Kung Fu ny alin’ny faha-31 Jolay hifoha 1 aogositra 1985. Maro ny namoy ny ainy sy naratra ary nitondra takaitra tamin’io ary ny velona voasambotra dia nogadraina.
Etsy ankilany, namoaka fanambarana ny “TRAD-KF” na “Association des Pratiquants traditionnel Kung-Fu Malagasy” fa “tsy ekenay sy melohinay ny fikasana handatsaka aina, indrindra fa fikasana hamono ny filohampirenena. Toherinay koa, hoy ihany ry zareo Kung Fu Malagasy, ny fanjanahana amin’ny endriny vaovao izay entina hamotehana ny fiandrianam-pirenena. Mijoro sy manentana ny vahoaka Malagasy izahay, hoy hatrany ny “Trad-KF” hiaro lalandava ny tanindrazana izay iaraha-manana.
Momba ny tsy fandriampahalemana manokana dia mampitandrina ireo mpanao sinto-mahery sy mpangarom-paosy ary mpanao hala-botry ny “Trad-Kf” fa hanampy ny vahoaka izahay, ka dia hifanena amin’ny mpaka kitay eny an-tsena sy an-dalambe eny ianareo mpanao asa ratsy raha mbola manohy ny fanaonareo.